သစ်ရွက်သီချင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » သစ်ရွက်သီချင်း	5
Posted by ko six on May 27, 2015 in Poetry |5comments
ko six has written 73 post in this Website..
အောင် မိုးသူ says: အသွားအပြန်အတွက်
Alinsett @ Maung Thura says: ဓါးလှံတွေကို နှုတ်ကြပြီပဲ. . .
.အေးလေ. . .
ငါတို့ကလည်း မပြိုလဲသင့်ဘူး. . .
ထုတ်မသုံးရဲတဲ့ သတ္တိတွေကို တနေရာရာမှာ စု ပုံပြီး
တစ် နှစ် သုံး ရယ်လို့ အားမာန်အပြည့်နဲ့ အော်ဟစ်မြည်တမ်းကြ. . .
Mike says: .သိပ်နားမလည်ပဲဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ
မြစပဲရိုး says: ကမ္ဘာဦးကတည်းက အရောင်ပြောင်း က ပုတ်သင်ညို ပေါ့။
ပုတ်သင်ညို နှစ်ကောင် မှာ တစ်ကောင်က စိမ်းချိန် တစ်ကောင်က နီ တော့ ဒါး ဆွဲ လှံဆွဲ ချ တော့မဲ့ ပွဲ ပေါ့ ကကြီးမိုက် ရာ။
. ရွာ့ ပြင်ညာသျှဉ်
. မြစာကလေး lol:-))).
မြစပဲရိုး says: နောက်တာ – နွေရာသီ မို့ သစ်ရွက်ကြွေ ချိန် လမ်းပေါ် အမှိုက်ပွလို့
စည်ပင်လာမကြုံး တာ ကို
စိတ်နာနာ နဲ့ ကိုဆစ် ရဲ့ ရင်တွင်းဖျစ်။